पृथकतावाद सकियो भन्दा कोहीकोही किन... :: सन्जिब बगाले :: Setopati
पृथकतावाद सकियो भन्दा कोहीकोही किन भुटभुटिएका? : प्रधानमन्त्री
सन्जिब बगाले काठमाडौं, फागुन २७
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को १८ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली। तस्बिर : निशा भण्डारी/सेतोपाटी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिके राउतसँग सरकारले गरेको सहमतिको आलोचना गर्नेहरू पानी बिनाको माछाजसरी भुट्भुटिएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको १८ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार सिंहदरबारमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र मधेसको अभियान चलाउने राउतले राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डतालाई स्वीकारेर मूलधारमा आएपछि विभिन्न स्वार्थ समूहको रोटी सेक्न बन्द भएको बताए।
उनले सहमतिमा जनमत संग्रह भन्ने शब्द कहिँ कतै नभएको र देशको अखण्डताको विषयमा जनमत संग्रह हुन नसक्ने कुरामा जोड दिए।
‘पृथकतावादको आन्दोलनलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौं। सम्झौतामा कहिँकतै जनमत संग्रह उल्लेख छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘किन कसैकसैलाई पृथकतावाद सकियो भन्दा यति बिघ्न खरो भएको हो? किन पानीबिनाको माछा जसरी भटुभुटिएको? म दंग परेको छु।’
उनले राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु ठूलो उपलब्धी भएको पनि जिकिर गरे।
सत्तारूढ दलकै नेताहरूले सरकार-राउतबीचको सहमतिलाई राष्ट्रिय हित र संविधानविपरित भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले सहमतिको भाषा नै दुई देशबीचको सम्झौताजस्तो भएकाले यसलाई सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन्।
आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले राउतसँग भएको सहमतिबारे गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग प्रश्न गरेका थिए।
सरकार र राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिको दोस्रो बुँदामा रहेको जनअभिमत भन्ने शब्दलाई राउत पक्षले जनमत संग्रह भनेर ब्याख्या गरेपछि त्यसबारे प्रश्न उठेको हो।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २७, २०७५, ०४:४१:००